कुलंगार र देशद्रोहीले यो सत्य सुनुन् ! - कुलंगार र देशद्रोहीले यो सत्य सुनुन् !
कुलंगार र देशद्रोहीले यो सत्य सुनुन् !
२०७५, २४ माघ, 07:59:59 PM
थारू, सन्थाल, उराउँ, राजबंशी, दनुवार, दुसाद, मुसहर, यादब आदिको अव्यवस्थित र उद्येश्यबिहिन बसोबासबाट विकसित भएको हो आजको तराई
♥ इन्द्र रिजाल ♥
भारतीयभन्दा बढी भारतीय (More Indian than Indians) भएर भत्केको सिंहदरबारमा सीके राउतको रचना र सीके लालको संगीतमा लथालिङ्ग मधेश भजाउने राजनीतिक आवरणको नंगा नाच गर्दै आएका केहीलाई सुनाउनै पर्ने यो सत्य घटना :
१९७५ मा सिक्किम बिलय गरेपछि बडा पौरखी र विजयी भएको मानसिकता बोकेर केही सिक्किमेहरू प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई भेट्न दिल्ली गएछन् । मनमा अनेक तमन्ना र सपना बोकेका थिए होलान् । इन्दिरा गान्धीबाट ‘भारत रत्न’ नै पाउने आशा पनि थियो होला । जानेबित्तिकै सरासर भेट पाइएला भन्दै गएका त दिल्लीमा ३ दिन कुराईसके, भेट पाउने अत्तोपत्तो छैन । प्रधानमन्त्रीको पीएले भेट्न इच्छुकको खबर नपु¥याइदिएको पनि होइन । पीएले इन्दिरालाई बारम्बार भन्यो, सिक्किम बिलयका हिरोहरू भेट्न आएका छन्, टायम माग्दैछन् । जवाफमा इन्दिरा गान्धी यसो पनि भन्दिनन् उसो पनि भन्दिनन् । बिल्कुल चूपचाप छिन् । तेस्रो दिनपनि सोही खबर पु¥याउँदा कुर्सीमा बसेर फायल हेरिरहेकी इन्दिराले आफ्नो चोरी औँला आफ्ना दुवै ओठमा ठड्याएर चुप लाग्न इशारा गर्दै छेउमै उभिएका पीएलाई भनिछन्, आफ्नो मातृभूमिप्रति इमानदार नहुने गद्दार सिङ्गो हिन्दुस्तानप्रति कसरी बफादार हुन्छ भन्न सकिन्न । यिनीहरूलाई हामीले आफ्नो मिशनमा उपयोग गर्नु थियो, गरियो । यिनीहरूको काम सकियो, छोडिदेउ । (One who is not sincere and devoted to his motherland, how such dishonest person can have devotion and integrity towards entire Hindustan? Thease people were to involve in our mission, it is now over, that’s all.)
भ्रष्ट राजनीतिको लहड चल्यो भन्दैमा न पहाड तराईलाई हेला गरेर एक्लै हिँडन सक्छ, न त तराई, रिसले छुट्टिएर हिन्द महासागरतिर गएर बस्नसक्छ । प्रकृतिले बाँधिदिएको यो थिति कुनैपनि राजनीतिका नाममा भत्काउने कोशिश गरियो भने हामी कसैको राष्ट्रिय पहिचान बाँकी रहँदैन । राष्ट्र बलियो बनाउन त्यो देशका नागरिक समुदायवीच भाईचारा र अन्तरनिर्भरताको विकास हुनैपर्छ । सहअस्तित्वमाथि सहकार्य नै राष्ट्र बलियो बनाउने अचुक आधार हो ।
आज फेरि लोकतन्त्रको उपभोगले बाटो बिराएर राष्ट्रियताउपर विवाद र बखेडाको रूप लिन थालेको छ । पटकपटक यो देशको मन्त्री वा लाभको पदमा बसेर अघाएको तर सधैंको असन्तुष्ट ‘मधेसी नेता’ कसैको आडमा ‘बिखण्डन’ को कर्कश आवाज भुक्ने गर्छन् । यसक्रममा नेपालको २५० वर्षदेखिको स्वाधीन अस्तित्व र महत्वबारे अनेक खोट र दोषका कुतर्कहरू आउने गर्छन । शान्ति स्थापना र संविधान जारी गर्ने यस महत्वपुर्ण घडीमा ती कार्यभार छोडेर निर्विवाद विषयलाई विवादमा घिसार्ने अहिलेको प्रवृत्तिले राष्ट्रपतिदेखि सामान्य नागरिकसम्मलाई झस्काएको छ । कतिपय आत्मघाती तथा विसर्जनवादी कुतर्कले नयाँ नेपाल होइन, ढुङ्गे युगतिरमात्र पु¥याउला, तर कसैको भलाई सम्भव हुँदैन । त्यसकारण नेपाली राष्ट्रियताको वर्तमान सन्दर्भमा सबै नेपालीले गम्भीरताका साथ ध्यान दिनु जरूरी भइसकेको छ ।
राष्ट्रियताको सन्दर्भमा ‘आमुल परिवर्तनकारी’ वा ‘क्रान्तिकारी’ हुनुको अर्थ कुलाङ्गार हुनु होइन । इतिहासका वास्तविकतालाई आजको पूर्वाग्रही दृष्टिकोणबाट परिभाषित गर्नुले आफ्ना पिता–पुर्खामाथि न्याय हुँदैन । ‘नयाँ नेपाल’ को औचित्य खोज्नेले ‘पुरानो नेपाल’ लाई गाली गर्नुपर्दैन / गर्नु हुदैन । जसले यो राष्ट्रको स्थापनाको शुरूआत गरेर अगाडि बढाए, यसको अस्तित्व र स्थायित्वको लागि अनुभवमा आधारित दिग्दर्शन दिए, जसलाई ‘दिब्य उपदेश’ भनिन्छ, तत्कालीन प्रशासनिक सञ्जालको स्थापना गरे, जसलाई ‘थिति बसाल्ने’ भनियो ।
पृथ्वीनारायण शाहको पथमा हिँडेर उनका उत्तराधिकारीहरूले सुगौली सन्धी (बि.सं. १८७२) सम्म नेपालको भौगोलिक एकीकरण चलाइरहे । तब उनकै शब्दमा ‘चारजात छत्तिसवर्णको साझा फुलबारी’, ‘नेपाल’ नामको विशाल राज्य खडा भयो, जुन राज्य तत्कालीन महाशक्ति बेलायती साम्राज्यसँग लड्ने हिम्मत र ताकत राख्दथ्यो । बि.सं. १८७२ सम्ममा गोर्खा राज्यको पराक्रम र बहादुरीको गौरबगाथा तत्कालीन भारतवर्ष (दक्षिण एशिया) मात्र होइन, विश्वभर फैलिएको बेलायती साम्राज्यभरि नै पुग्यो । आज सुनिने वीरताजन्य ‘गोर्खाली’ शब्द होस् वा भारतमा स्थापित ‘गोर्खा पार्वत्य परिषद’ वा छुट्टै ‘गोर्खाल्याण्ड’ राज्यको संघर्ष, नेपाल राष्ट्रको स्थापना गर्ने ड्राइभिङ् फोर्स तथा त्यसको उत्तरदान हो ।
तराई नेपालको एकीकरणदेखि नै छ । तर, नेपाल राष्ट्र खडा भईसकेर सुगौली सन्धीले यसको पछिल्लो भौगोलिक आकार तय गरेपछिमात्र तराईमा राज्यले औपचारिक रूपमा बसोबासमा ध्यान दिन थालेको हो, जागीर, जङ्गल र जमिन बाँड्न थालिएको हो । नत्र त्यसभन्दा अघि थारू, सन्थाल, उराउँ, राजबंशी, दनुवार, दुसाद, मुसहर, अल्पसंख्यक यादब आदिको अव्यवस्थित र उद्येश्यबिहिन बसोबासबाट विकसित भएर बनेको हो आजको तराई, जसमा २०१५ सालमा प्रथम जननिर्वाचित सरकारले आधुनिक तराईको रुपरेखा तयार पारेको हो । ‘औलो, हिलो र धुलो’ माथि राज्यको उपेक्षा तथा तिरस्कारको भयानक कहर काटेको इतिहास बनाएका तराईका धर्तीपुत्रहरूले गोडेको आजको तराई सबैको गन्तब्य बनेको हो ।
निश्चय नै हिमाल, पहाड र तराईको भूबनोट र मानवीय पक्षमा विभिन्नता छ, तर बिभिन्नतामा अभिन्नता पनि छ । जसरी मुख र आँखाको काममा फरक छ तर तिनलाई एक अर्काबाट छुट्याएर राख्न सकिन्न । छुटाउने हठ गर्न थालियो भने जीवन नै रहन्न । त्यसैगरी पहाड र तराईकाबीच पनि ‘विभिन्नतामा अभिन्नता’को प्राकृतिक सम्बन्ध छ । भ्रष्ट राजनीतिको लहड चल्यो भन्दैमा न पहाड तराईलाई हेला गरेर एक्लै हिँडन सक्छ, न त तराई, रिसले छुट्टिएर हिन्द महासागरतिर गएर बस्नसक्छ । प्रकृतिले बाँधिदिएको यो थिति कुनैपनि राजनीतिका नाममा भत्काउने कोशिश गरियो भने हामी कसैको राष्ट्रिय पहिचान बाँकी रहँदैन । राष्ट्र बलियो बनाउन त्यो देशका नागरिक समुदायवीच भाईचारा र अन्तरनिर्भरताको विकास हुनैपर्छ । सहअस्तित्वमाथि सहकार्य नै राष्ट्र बलियो बनाउने अचुक आधार हो । अन्तर्निर्भरताले मात्र सबैलाई आत्मनिर्भरता दिन्छ । बाध्यता बोकेर र मुख रातो पारेर शत्रु मानसिकताको ‘सहअस्तित्व’ मा बस्नु हुँदैन, भाईचाराको बाटो पहिल्याउनै पर्छ, पाइन्छ । नपाउन्जेल खोजेपछि नभेटिने कुरै छैन ।
तराई मूलका चर्चित विश्लेषक सीके लालले आंशिक सत्य लेखेका छन्— जङ्गबहादुरले नयाँ मुलुक (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) कम्पनी सरकारसँग तावेदारी गरेर बकस ल्याएका हुन् । ‘तावेदारी’ होइन, सन् १८५७ मा भारतमा भएको अनियन्त्रित र भयावह सिपाही विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्न ‘गोर्खाली सेना’ सफल भएपछि ‘कम्पनी सरकार’ खुशी भएर नेपाली वीरतालाई ससम्मान नयाँ मुलुक फिर्ता गरेको हो, सुगौली सन्धीमा भएको अन्यायको क्षतिपूर्ति गरेको हो । पहिलेका जङ्गबहादुरले यसरी पनि मुलुक फराकिलो बनाएका थिए भने आजका नव जङ्गबहादुरहरू मुलुकका लागि ‘भङ्गबहादुर’ हुनु कसैका हितमा हुँदैन ।
बीपीले जवाफ दिनुभएछ— जसरी एउटा पहाडे उम्मेद्वार मधेशीको भोट पाउने उम्मेद राख्दछ, त्यसैगरी एउटा मधेशी उम्मेद्वारले पहाडमा गएर पहाडेहरूको भोट पाउने परिस्थितिको निर्माण गर्नु नेपाली कांग्रेसको सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता उपरको कार्यभार हो । मधेशी समाजमा नेपाली राष्ट्रियताको सञ्चार भइरहेको उहाँ देख्नुहुन्थ्यो ।
इतिहासबाट हामीले जे पाएका छौं, त्यही नै हाम्रो सम्पत्ती हो । यसको सदुपयोगको कला नै नेपालको परम आवश्यकता हो । एउटाले अर्कोका खोट र दोषमात्र कोट्याउने होइन, आफुभित्रका कमि–कमजोरी र गल्ती केलाउनु महानता हो र अगाडि बढ्ने शुभलक्षण हो । यहाँ कसैले ‘मधेश विरोधी’ भएर बुद्धिमानी देखाउन सक्दैन, न त जातीय राज्य बनाएर आफ्नो हित पाउनसक्छ । भ्रष्ट र आपराधिक राजनीतिका नाइकेहरूको विरोध गर्नु पहाडे वा मधेशी विरोधी अर्थ लगाउनु तिनै भ्रष्ट र अपराधीहरूको वितण्डाको एउटा रूप हो । उनीहरूका भ्रष्ट र आपराधिक चरित्रसँग सती जानुपर्ने जिद्दी हो । भ्रष्टाचारको दोषमा जेल जाकिनुपर्ने चरित्रबाट ‘मधेश र काठमाडौंको सम्बन्ध टुट्नसक्छ’ भनेर सुनाउनु विक्षिप्त मानसिकताको द्योतक हो । सत्तामा ढलीमली गरिसकेका भ्रष्ट र आपराधिक चरित्रबाट राज्य थिलथिलो भएको हो, ‘मानवअधिकारको उल्लङ्घन’ हुनपुगेको हो ।
२०१५ सालकै प्रसङ्ग हो, आमचुनाबका क्रममा कसैले बीपी कोइरालालाई सोधेछ, नेपाली समाज र राष्ट्रप्रति नेपाली कांग्रेसको अन्तिम लक्ष के हो ? बीपीले जवाफ दिनुभएछ— जसरी एउटा पहाडे उम्मेद्वार मधेशीको भोट पाउने उम्मेद राख्दछ, त्यसैगरी एउटा मधेशी उम्मेद्वारले पहाडमा गएर पहाडेहरूको भोट पाउने परिस्थितिको निर्माण गर्नु नेपाली कांग्रेसको सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता उपरको कार्यभार हो । मधेशी समाजमा नेपाली राष्ट्रियताको सञ्चार भइरहेको उहाँ देख्नुहुन्थ्यो ।
जनतामात्र राष्ट्र हो भन्ने तर्क एकथरिबाट प्रक्षेपण भइरहेको छ । जनताका भाषा, भेषभुषा, संगीत, साहित्यलगायत सांस्कृतिक गतिविधि, परम्परा, जीवनशैली आदि यावत कुरा राष्ट्रका धरोहर हुन्, राष्ट्रिय पहिचानका आधार हुन् । तिनीहरूको थातथलो भौगोलिक राष्ट्र हो । सबैभन्दा मूख्य कुरा ती जनतामा आफ्नो शासन आफैं छान्ने अधिकार र कानुनद्वारा शासित हुने कर्तब्यले सुसज्जित हुनुपर्छ । राष्ट्र हुनलाई आवश्यक यी सबै तत्व र पक्षको योग यहाँ छ, खाली यसलाई भ्रष्ट राजनीतिले बिथोल्नुसम्म बिथोलेर विकृत र दुषित बनाएको हो ।
त्यसैले कसलाई यहाँ ‘आदिवासी’ वा ‘बर्तमानवासी’ भनेर विभेद गर्ने ? ‘आदिवासी’ हुनुको पहिलो विशेषता उसले जातीय राज्यका रूपमा विभाजन होइन, सिङ्गो राष्ट्र खोज्नुपर्छ । किनकि यो अल्पसंख्यकहरूको राष्ट्र हो । यहाँ कसैको पनि आफैंमा बहुमत छैन । यस्तो मुलुकमा जातीय भाईचारा, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको ज्यादा जरूरत हुन्छ ।
नेपाल आफैँ विश्वको एउटा वरिष्ठ राष्ट्र हो । स्थापना, स्वाधिनता र निरन्तरताका आधारमा हेर्दा नेपालजति पुराना वा ज्येष्ठ (वरिष्ठ) मुलुक विश्वमा कमै छन् । यो विविध संस्कृति, जाति र नश्लहरूको सङ्गमभूमि हो । हिमालयतिरबाट उत्पत्ती भएर आएको एउटा संस्कृति छ, जसलाई शैब संस्कृति भनी पुराणले महिमामण्डित गरेको छ । समुद्रतिरबाट अर्को संस्कृति पनि यहीँ आएर मिलेको छ, जसलाई वैष्णब संस्कृति भनिएको छ । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा शैव संस्कृतिलाई किराँत वा मङ्गोल संस्कृति र वैष्णब संस्कृतिलाई आर्य संस्कृति भनिएको हो । आर्य र मङ्गोलको सङ्गम संस्कृति नै नेपाल राष्ट्र बनोटको आधार हो ।
त्यसैले कसलाई यहाँ ‘आदिवासी’ वा ‘बर्तमानवासी’ भनेर विभेद गर्ने ? ‘आदिवासी’ हुनुको पहिलो विशेषता उसले जातीय राज्यका रूपमा विभाजन होइन, सिङ्गो राष्ट्र खोज्नुपर्छ । किनकि यो अल्पसंख्यकहरूको राष्ट्र हो । यहाँ कसैको पनि आफैंमा बहुमत छैन । यस्तो मुलुकमा जातीय भाईचारा, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको ज्यादा जरूरत हुन्छ । रङ्गको राजनीति र चेहराको अहम्ले सबैलाई नर्कमा पु¥याउँछ भन्ने होशियारी मधेशीले पनि उत्तिकै ख्याल राख्नु बेश हुन्छ ।
क्रिश्चियन धर्म प्रचारका लागि यसरी हुदैछ काम
मोदीको शपथ आज, ओली नयाँ दिल्ली प्रस्थान, सुरक्षा व्यवस्था कडा
नेपाली कांग्रेसको जागरणमा नेताहरूको निहित स्वार्थ
कालो कानुनका विरुद्ध पत्रकारले बाँधे ‘कालोपट्टी’